Date My Pet » 10 First Date Outfit Tips ho Men
Efa nihaona izahay ny olona rehetra, raha tsy mijery ny tsara indrindra. Efa nihaona izahay mpiara-monina vaovao, rehefa Nanapaka ny bozaka. Efa nihaona izahay mpiara-miasa vaovao tamin'ny andro rehefa Hirotsaka kafe eo amin'ny lobaka. Toy ny hoe mandeha, isika ihany no mahazo iray fahafahana hanao fahatsapana voalohany. Isika dia ho, na izany aza, jereo ny mpiara-monina sy ny mpiara-miasa angamba tiantsika mihoatra noho ny. Ny daty dia tsy mitovy. Voalohany, tsy misy antoka fa hahazo ny fahafahana ho an'ny hafa daty. Faharoa, -dravehivavy fa miraharaha betsaka kokoa momba ny tarehiny noho ny namanao na ny mpiara-miasa. Aza manahy, aza. Tonga eto aho mba hanampy amin'ny 10 First Date Outfit Tips ho Men.
1. Akanjo ny fombafomba haavon'ny ny hetsika. Raha saika ny olona hafa rehetra ao amin'ny trano fisakafoanana iray dia manao fanatanjahan-tena palitao, tsy tokony hampiseho, raha tsy iray. Tena mora kokoa ny akanjo eo amin'ny ny lalitra, toy ny akanjo Raha tsapanao fa mitady underdressed.
2. Manao akanjo izany mba hifanaraka amin'ny toetr'andro. Ndao hoe manana sakafo sy aorian'ny sakafo hariva drafitra ny daty-kevitra mandeha eny an-dalana ho tsindrin-tsakafo. Te-ho vonona.
3. Manao tsara kiraro! Tsy misy kapa na kiraro…raha tsy any amin'ny tora-pasika na milalao tenisy. Vehivavy tia kiraro sy dia hahatsikaritra anao.
4. Ny vy ny lobaka. Mety tsy hahatsikaritra (na ny fikarakarana) raha ny akanjo dia ironed, fa izy no tena mety filazana (sy fitsaboana).
5. Manao zavatra izay mifanaraka tsara. Ny mendrika ny akanjo no zava-dehibe kokoa noho ny marika, fomba na ny zavatra hafa. Ho anareo halaim-panahy hanao akanjo lobaka faran'izay mafy…aza…fotsiny aza…
6. Manao zavatra izay efa zatra sy mahazo aina. Indrindra fa raha mitady ho lasa matahotahotra amin'ny daty voalohany, manome ny tenanao tsy zavatra iray mba manahy.
7. Manaova ny fehin-kibo, ary ho azo antoka fa mifanaraka ny kiraro. Dia manao ny akanjo mijery feno kokoa.
8. Get feedback. Anontanio ny mpiray efitra, namana, mpiara-miasa na ny olona iray atokisanao ny momba ny akanjo. Tsy voatery ny hamela azy ireo hanikina anao, fa mangataka fotsiny OK ianareo raha mety hanampy anao avy.
9. Aza manao na inona na inona loatra na sehatra. Tsy manana akanjo toy ny raibe, fa tsy tianao ny akanjo mba ho fialamboly. Fa miaraka amin'izay koa,…
10. Mijanòna ho ianao ihany! Vehivavy tia matoky. Manaova zavatra izay maneho ny toetra.